မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်မှုအကြောင်းသိကောင်းစရာ | Myanmar Tech Press
Image Source: http://trading2day.com
မြန်မာနိုင်ငံ မှာသာမက နိုင်ငံတိုင်းဟာ ကုန်သွယ်ခြင်းဆိုသည်ကို မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက်ကြရပါတယ် ။ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖွံံ.ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ကုန်သွယ်မုှ ဟာ အလွန်အရေးပါပြီး အခြေခံကျလှပါတယ် ။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ၀င်ငွေဟာ ကုန်သွယ်မှု နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေပါတယ် ။
အခြေခံအားဖြင့် ကုန်သွယ်ခြင်း နှစ်မျိုး ရှိပါတယ် ။
၁ ။ ပြည်တွင်းကုန်သွယ်ခြင်း နဲ့
၂ ။ ပြည်ပကုန်သွယ်ခြင်း ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
နိုင်ငံ ရဲ့ နယ်နမိတ် အတွင်းမှာလုပ်ဆောင်တဲ့ ကုန်စည်လဲလှယ်ခြင်း ၊ ရောင်းချခြင်း တွေကို ပြည်တွင်းကုန်သွယ်ခြင်း လို့သတ်မှတ်ပါတယ် ။ ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မုှပြုလုပ်ရာတွင် တစ်နိုင်ငံလုံးတရား၀င် လက်ခံကျင့်သ့ုံူးတဲ့ ငွေကြေးတန်ဖိုး တမျိုးထဲဖြင့်သာ ရောင်း၀ယ် သုံးစွဲခွင့်ရှိပါတယ် ။ ဥပမာအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှု ပြုလုပ်ရာတွင် မြန်မာငွေ ‘ကျပ်’ တစ်မျိုးထဲဖြင့်သာ ပြည်တွင်းတွင် ကုန်စည်များ ရောင်း၀ယ်သုံးစွဲခွင့် ရှိပါတယ် ။ အစိုးရအနေဖြင့်လည်း ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မုှမူဝါဒ နှင့်ပတ်သတ်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို ရိုး၇ှင်းလွယ်ကူစွာပဲ ချမှတ်ပေးထားပါတယ် ။ ပြည်တွင်းတွင် ပြုလုပ်ရောင်းချသောကုန်စည်များအတွက် တစ်နေရာမှအခြားဒေသသို့ ရောင်းချရာတွင် အခွန်နှုန်းထားများပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါဘူး ။
ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မုှ ဟာလည်း တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေးဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ နေရာ မှ ပါ၀င်ပါတယ် ။ ပြည်တွင်းကုန်သွယ်ခြင်းဟာ ပြည်တွင်းဈေးကွက်ကို တည်ငြိမ်စေပြီး ပြည်တွင်းရှိ၀ယ်ယူစားသုံးသူများကို ကုန်ဈေးနုှန်းမတည်ငြိမ်ခြင်း ကိုလျော့ကျစေပါတယ် ။ ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုကို စည်းစနစ်ကျကျထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း မရှိပါက ပြည်တွင်းဈေးကွက်မတည်မငြိမ်ဖြစ်ပြီး ကုန်ဈေးနှုန်း တက်ခြင်း ၊ ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်များပြတ်လတ်ခြင်း တို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ် ။ထို့ကြောင်. ပြည်တွင်းဈေးကွက်ကို တည်ငြိမ်စေရန် ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုကို စနစ်တကျဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ။
ပြည်ပကုန်သွယ်ခြင်းဟာ ပြည်တွင်းကုန်သွယ်ခြင်းထက် ပိုမိုပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းသလို ပိုမိုပြီးရှုပ်ထွေးပါတယ် ။ ပြည်ပကုန်သွယ်ခြင်းကို လုပ်ကိုင်သောကုန်သည်များအနေဖြင့်လည်း နိုင်ငံခြားငွေကြေး ပြောင်းလဲမှု နုှန်းထားများ ၊ နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်မှုစည်းမျဉ်းများ ကို သိရှိရန်လိုအပ်ပါတယ် ။
ပြည်ပကုန်သွယ်မှုဟာ တိုင်းပြည်၏၀င်ငွေကို တိုးတက်ဖွံ.ဖြိုးစေရုံသာမက မလိုအပ်သော ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်များကို သက်သာစေပါတယ် ။ ပြည်ပကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရာတွင် အဓိကအားဖြင့် မိမိနိုင်ငံအတွင်းတွင်မထုတ်လုပ်နိုင်သော ကုန်စည်များ ၊ ပြည်တွင်းတွင်ထုတ်လုပ်ရန ်ခက်ခဲသော ကုန်ကြမ်းရှားပါးသော ၊ ဈေးကြီးသော ကုန်စည်များကို အခြားနိူင်ငံများမှ ၀ယ်ယူတင်သွင်းခြင်းဖြင့် မလိုလားအပ်သောကုန်ကျစရိတ်များ ပိုမိုသက်သာစေရုံသာမက တိုင်းပြည်ကိုလည်း ပိုမိုပြီးအကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်် ။ ပြည်သူများအနေဖြင့်လည်း ဈေးကွက်အတွင်းရွေးချယ်စရာများပြားပြီး ပိုမိုအရည်အသွေးကောင်းမွန်သော အသုံးအဆောင် ၊ ကုန်စည်များကို သုံးစွဲနိုင်သဖြင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်းကို မြှင့်တင်စေနိုင်သည် ။
Image Source: http://www.frndzclub.ml
ပြည်ပကုန်သွယ်မှု ဈေးကွက်ဟာ ပြည်တွင်းဈေးကွက်ထက် ပိုမို ကျယ်ပြန်.ပြီး နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုကိုလည်း တိုးတက်စေပါတယ်် ။ နိုင်ငံအချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကိုလည်း တိုးတက်စေတယ် ။ ခြွင်းချက်အနေနဲ့ ပြည်ပကုန်သွယ်မှုသည် ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုတွင် ပေးဆောင်ရခြင်း မရှိသော နိုင်ငံခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုန်ကျစရိတ်များကို ပေးဆောင်ရသည် ။ ကုန်သွယ်သောနိုင်ငံများအကြား အကွာအေ၀း ပိုမိုေ၀းကွာလာသည်နှင့်အမျှ သယ်ယူပို့ဆောင်ခသည် ပိုမိုမြင့်မားလေပင်ဖြစ်သည် ။ ထို.ကြောင်. USA , Japan စသောနိင်ငံများမှ တင်သွင်းသော ကုန်စည်များသည် ပိုမိုဈေးကြီးခြင်းဖြစ်သည်။
မိမိပြည်တွင်း၇ှိ လုပ်ငန်းများ ၊ စက်ရုံ အလုပ်ရုံများကို ပြည်ပလုပ်ငန်းများ၏ ပြိုင်ဆိုင်ခြင်းရန်မှ ကာကွယ်နိုင်ရန် ကာကွယ်မှုစည်းမျဉ်းဥပဒေများကို နိုင်ငံအများတွင် လက်ခံကျင့်သုံးလျက် ရှိကြသည် ။ အခွန်များကောက်ခံခြင်း ၊ ကုန်သွယ်မှုခွဲတမ်းများ ချမှတ်ခြင်း ၊ ကုန်သွယ်မှုများကိုပိတ်ဆို့ခြင်း ၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း စသဖြင့် ဥပဒေများစွာ ချမှတ်ထားသည် ။ ပြည်ပကုန်သွယ်မှုတွင် မိမိနိုင်ငံတွင် အထွက်များသော ပေါများသော ကုန်ကြမ်းများ ၊ သယံဇာတများကို နိုင်ငံခြားသို့ တင်ပို့ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံခြား၀င်ငွေများတိုးပွားစေနိုင်ပါတယ် ။
မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် မိမိနိုင်ငံတွင် အထွက်များသော ၊ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် စိုက်ပျိုးနိုင်သော ဆန်စပါးကို အဓိက ပြည်ပတင်ပို့ကုန် အနေဖြင့် တင်ပို့လေ့ရှိပါတယ် ။ ယခုအခါတွင် အရှေ့တောင်အာရှ အတွင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ဆန်စပါးဈေးကွက်သည် အခြားနိုင်ငံများထက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာပြီး ပြည်ပကုန်သွယ်မှုသည်လည်း ပိုမိုမြင့်မားလာခဲ့ပါတယ်် ။ မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးကူးသန်းရောင်း၀ယ်မှု၏ ၈၀ရာခိုင်နှုန်းသည် တရုတ်နိုင်ငံသို.တင်ပို့ရောင်းချခြင်းဖြစ်ပြီး ကျန် ၂၀ရာခိုင်နှုန်းမှာ အခြားပြည်ပနိုင်ငံများသို့ တင်ပို.လျှက်ရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ အသုံးပြုမှုအများဆုံး Online Shopping Websites များ အကြောင်း →